Khasaare ka dhashay Weerarro lagu qaaday Kaniisado ku yaalla Magaalada Gaarisa ee dalka Kenya | Ogaalnews	CIMILLADA HARGEYSA
Khasaare ka dhashay Weerarro lagu qaaday Kaniisado ku yaalla Magaalada Gaarisa ee dalka Kenya
TweetNairobi, 02 July, 2012 (Ogaal)-Ugu yaraan 15-qof oo laba sarkaal oo booliiska Kenya ka tirsan ay ku jireen ayaa ku dhintay, 50-ruux oo kalena way ku dhaawacmeen weerarro lagu qaaday laba kaniisadood oo ku yaalla magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi-bari ee dalka Kenya.
Weerarradan oo isugu jiray qaraxyo iyo kuwo toos ah ayaa dowladda Kenya waxay ku eedeysay Xarakada Al-shabaab oo ciidamadooda ay kula dagaalamayaan qaybo ka tirsan Koonfurta dalkaasi Soomaaliya, inkastoo Al-shabaab aanay sheegin inay mas’uul ka tahay weerarkaas.
Taliye ku xigeenka ciidanka booliiska gobolka Waqooyi-bari ee Kenya, Philip Ndolo oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in weerarka kaniisadaha ay isugu jireen kuwo toos ah iyo bambooyin isagoo xusay in 15-qof ee dhintay dhammaantood la toogtay.
“Dadka dhintay waxaa ku jiray laba sarkaal oo booliis ah, kuwaas oo toogasho toos ah lagu dilay; dadka kale ee dhintay waxaa ka mid ahaa lix haween ah iyo laba rag ah,” ayuu taliye ku xigeenku u sheegay warbaahinta.
Cisbitaalka guud ee Gaarisa ayaa la dhigay dhaawacyadii ka dhashay weerarrada, iyadoo dadka intooda badan ay ku dhaawacmeen rasaas la furay qaraxyada kadib, waxayna dhaawacyadu isugu jiraan kuwo halis ah iyo kuwo fudud.
Goobjooge magaciisa ku sheegay Dennis Nzioki oo ku sugnaa bannaanka kaniisadda AIC ayaa saxaafadda u sheegay in bambooyin lagu tuuray kaniisadda ayna kaga dhaceen dusha sare oo uu maqlay qarax weyn, markaas kadibna la furay rasaas fara badan.
Weerarkan ayaa imanaya iyadoo maalin ka hor xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya laga afduubay afar ruux oo samafalayaal ah kuwaasoo u shaqeynayay hay’adda NRC weli aan la ogeyn halka lagu haysto.
Bishii Abriil ee sannadkan ayaa bambooyin lagu weeraray kaniisad ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana lagu dilay laba qof 15-qof oo kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaadhay.
Dalka Kenya ayaa tan iyo bishii Oktoobar ee sannadkii hore oo uu ciidamo u diray gudaha dalka Soomaaliya, waxaa ka dhacayay qaraxyo lala beegsanayo goobo ay ka mid yihiin kaniisadaha, istaamada basaska laga raaco iyo goobaha kale ee muhiimka ah, kuwaas oo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Maxaad ka taqaanaa astaamaha Cudurka Qoorgooyaha iyo sida loo daweeyo ? - 32,857 viewsSomaliland: If Eritrea & South Sudan Could Gain Sovereignty, So Could Somaliland - 17,166 viewsSomaliland hopes for international recognition - 15,789 viewsGaddafi:’It’s a conspiracy to take our oil and a plan to re-colonise our country’ - 14,882 viewsHead of Uganda EC: I will announce winner within 48 hours - 11,776 viewsDalalka adduunka ugu farxadda badan iyo sida ay u kala horreeyaan - 11,551 viewsSomalia: Exposing the Hideous Face of the Puntland Regime - 11,451 viewsTel Aviv: Hostage Drama in Turkish Embassy - 11,170 viewsIGAD with the Largest Donors Delegation arrives Somaliland - 10,886 viewsSomaliland Coastguards and Ground Troops—The Real Panacea for Sea Piracy - 10,839 views